Ukwazi nokuxhaphaza amandla we-KRunner | Kusuka kuLinux
Abasebenzisi be Unity Uzokwazi ukuthi enye yezindaba ezithakazelisa kakhulu ukuthi lokhu shell ukuze I-Gnome es I-HUD.
Angikwazanga ukuchaza ukuthi kuyini I-HUD Ngokuqondile, ngisho lokhu ngoba kungaba isiqalisi sohlelo lokusebenza esithuthuke kakhulu, noma umabi we-command onekhono eliphezulu.
Sasiyibona njengethuluzi okuhlanganiswa kwalo nedeskithophu kuphezulu kakhulu ukuthi sikwazi "uku-oda" Unity ukwethula i-URL kusuka kuzintandokazi ze- Firefox, evula iwindi lokuqamba umlayezo kusuka Thunderbird, elawula ibha yamathuluzi yohlelo lokusebenza, kahle ...
I-HUD kuyithuluzi elihle kakhulu elenza kube lula ngathi ukuthi sisebenzisane nalo Unity. Futhi iphuzu lami akukhona ukuliqhathanisa nalo UKRunner, kodwa ukukhombisa ukuthi izinto eziningi azenzayo I-HUD, sezivele zisetshenzisiwe kulolu hlelo lokusebenza.
Akuyona into ngaphandle kwalelo windi le-pop-up elivela lapho lingena KDE sicindezela inhlanganisela yokhiye I-Alt + F2, noma ngokucindezela noma yimuphi ukhiye ngenkathi i- Ideski ligxile. Kepha lelo windi elincane liqukethe ubuqili iningi lethu elingalazi noma elingalisebenzisi futhi eliwusizo kakhulu ... Ake sibone ezinye zazo ..
Ngaphezu kwesiqalisi nje.
Ngenxa yokuhlanganiswa kwe- KDE, I-KRunner iba ithuluzi elinamandla kakhulu. Isibonelo, uma sisebenzisa incwadi yamakheli ehlanganiswe ne- Akonadi, kufanele sithayiphe igama / isidlaliso somsebenzisi futhi singamthumelela umyalezo sisebenzisa I-Kmail:
Futhi singenza imisebenzi yokwengeza, ukususa, ukubuyabuyelela nokuhlukanisa:
Noma singasesha ku-Amazon:
Futhi singaqaqa futhi sivule amadivayisi esiwaxhumile (i-HDD, izinti ze-USB ... njll):
Singasesha amafayela ethu asanda kuvulwa:
Singakwazi ukuphatha ukuphuma kwethu noma sicishe ikhompyutha yethu:
Noma thinta ibhukwana lesicelo:
Futhi-ke, sinezinye izinketho eziningi njengokufuna Izintandokazi zesiphequluli sethu, ukuqalisa izinhlelo zokusebenza, nezinye izinketho eziningi lokho I-KRunner inikeza.
Uma ufuna ukwazi zonke izinketho, kufanele usebenzise I-KRunner bese uqhafaza kusithonjana esinophawu lombuzo [?] kungaba yini usizo, kunjalo. Futhi uma ufuna imininingwane eyengeziwe, ungavakashela lesi sixhumanisi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Ukwazi nokuxhaphaza amandla we-KRunner
Kubantu abasebenzisa i-Twitter kungasiza.
UKrunner + Twitter.
Kuhle .. +1 i-KRunner…
Amandla amaningi ku:
Ngicabanga ukuthi ukuphawula kwami ​​kokuqala kusalokhu kuthreyimu yokulinganisa noma yogaxekile (ngokubeka izixhumanisi ezintathu engicabanga ukuthi). Banolwazi oluthokozisayo mayelana neKRunner.
Khayelihle Makhaye placeholder image kusho
Kungakho i-KDE ideskithophu enhle kakhulu ye-Linux kude ... Noma amaTaliban ecabanga ngenye indlela.
Phendula u-Ivan Barra Martinez
Bengingazi nokuthi icelwa nganoma yimuphi ukhiye uma usedeskithophu. Nsuku zonke okuthile okusha kufundwa i-xD
Ngamagama ami "KDE-eros" ngihlala ngummeli weKRunner; Ngicabanga ukuthi ingesinye sezici ezinhle kakhulu ze-KDE, futhi inikezwa ukwaziswa okuncane kakhulu ngombono wami… Okusho ukuthi yinhle kangakanani 😉
Ungase futhi uqalise imishini ebonakalayo, uma unamasayithi ayizintandokazi eMarble ungaya kubo usuka krunner, useshe i-wikipedia, ku-youtube, ungabulala uhlelo lokusebenza (kill applicationname), kungekudala luzoba nesichazamazwi ku-KDE 4.10 .. ngamafuphi , Owokugcina
Wow, kubukeka kuthakazelisa kakhulu. Angikaze ngisebenzise i-KDE. Uma ngonyaka ozayo ngithenga ikhompyutha yami enkulu engiyifunayo, mhlawumbe ngizothutha ngisuke eXfce ngiye ku-KDE. Okwamanje, ngijabule ngeXfce.
Kungiphuzise kancane, emasontweni ambalwa edlule nginqume ukushiya i-OpenSuse nge-KDE yokufaka i-Debian net nge-LXDE (ushintsho olukhulu huh?
Kepha imininingwane emihle, ngokuthembeka njalo ngenyanga ukuthi ngine-KDE ku-OpenSuse bengingazi ukuthi ngiyisebenzisa kanjani i-Krruner.
Ngiyaqhubeka nokuhlala neGnome neXfce, kimi okungcono kakhulu. Ngiyavuma, ngingumTaliban.
noma ngokucindezela noma yimuphi ukhiye ngenkathi i-Desktop igxile
Akungisebenzeli kuKubuntu… 🙁
Iphutha lokufaka okungeziwe kwezivakashi ze-VBox: Isexwayiso: inguqulo engaziwa ye-X Window System efakiwe.
Ama-lightworks atholakalayo nge-Linux, kepha kuphela abambalwa